Imiklomelo yePortalProgramas (ama-euro ayi-1400 eminikelweni) | Kusuka kuLinux
Ama-PortalProgramas Awards (ama-euro ayi-1400 ngeminikelo)
Ama-PortalProgramas Awards for Free Software 2011 aqala. Kulo nyaka izindaba zifaka ama-euro ayi-1400 5 eminikelweni nasezigabeni ezintsha ezi-XNUMX.
Kepha… Imayelana nani lemiklomelo?
Kulula, bavuza izinhlelo / isoftware ethonye kakhulu intuthuko yezobuchwepheshe.
Ngishiya okukhishwe kwendatshana esemthethweni:
Sonke siyazi ukuthi izinhlelo zamahhala ezithandwa kakhulu njenge Ares, eMule, I-OpenOffice.org ... kepha kusetshenziswa iningi lentuthuko yamanje yezobuchwepheshe software free, isoftware evame ukunganakwa futhi engaqashelwa kakhulu, kepha lokho kubalulekile kubuchwepheshe.
Ngakho-ke, kuma-Awards Izinhlelo zePortal Kulo nyaka sethule imikhakha emisha emi-5:
Okubalulekile kwezobuchwepheshe: Izinhlelo zamakhompiyutha zithuthukisa ukubonga ukuthi kunesisekelo esihle samahhala sesoftware lapho zakhiwe khona (izinhlaka, ukuhlolwa, imininingwane yolwazi ...). Sivuza isoftware yamahhala esize ukuthuthuka kakhulu
kwezobuchwepheshe kulo nyaka.
Okubalulekile kweWebhu: Amakhasi ewebhu aguqukile futhi ashesha, abe namandla futhi ahambisane nazo zonke iziphequluli. Sivuza isoftware yamahhala esize kakhulu ukuthuthukisa ubuchwepheshe bekhasi lewebhu kulo nyaka.
Kubalulekile ekuxhumaneni: Ukusatshalaliswa kwezindaba nokuxhumana kuyinsika eyisisekelo kwi-Intanethi ebambe iqhaza ekuguqulweni komphakathi. Futhi lokhu kubonga ngokushesha ezinhlelweni ezithile zamahhala ezilawula ukuphathwa kwamabhulogi, omagazini, izinkundla ... kanye nokuxhumana phakathi kwamahhala okusize kakhulu ukuthuthukisa ukuxhumana kwi-Intanethi kulo nyaka.
Okubalulekile kumanethiwekhi wokuxhumana: Sivuza isoftware yamahhala kakhulu okusizile ukwenza ngcono ukusebenza kwamanethiwekhi wokuxhumana.
Okubalulekile kwebhizinisi: Sivuza isoftware yamahhala leyo
Kusizile ukukhula kwebhizinisi.
Isoftware yamahhala edume kakhulu: Isoftware yamahhala ibinganakwa ngabasebenzisi abaningi ukube bekungekhona izinhlelo ezisetshenziswe kabanzi ezisize ukuyazisa umphakathi jikelele. Sivuza labo abasize kakhulu ukukhangisa ngesoftware yamahhala kulo nyaka.
Iningi lama-software wamahhala aguqukayo: Siqokomisa iphrojekthi ekhule kakhulu kulo nyaka futhi esiza kakhulu ukuthuthukisa ubuchwepheshe.
Amandla okukhula amakhulu: Sigqamisa isoftware yamahhala leyo
okulindelwe okuningi kufanele kukhule uma uthola umnikelo. Kunamaphrojekthi amaningi anemibono emihle kepha noma kunjalo ayinayo ingqalasizinda eyenele ukuwafeza: amaseva anamandla, ama-CPU ... Lo mklomelo uya ohlelweni olungakhula kakhulu ngenxa yomnikelo.
1 Ama-euro angu-1.400 eminikelweni:
Ama-euro angu-1.400 eminikelweni:
Kusuka Izinhlelo zePortal sifuna ukusabalalisa isoftware yamahhala ngenkathi sisebenzisana ukuyakha. Kungakho senza iminikelo yezimali ezisiza ukuthuthukiswa kwamaphrojekthi amaningi. Ngonyaka wokuqala sihambise ama-euro angama-500, kuhlelo lwesibili lwama-Awards bekuyi-1.000, kulokhu kuzoba njalo Ama-euro angu-1.400 eminikelweni. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani isoftware yamahhala
idinga iminikelo, eminye yayo besivele siyifingqa uma sikhuluma ngayo Isoftware yamahhala ikhiqiza kanjani imali.
Novemba 23 - " Ukuphakanyiswa kuyaqala
Disemba 1 - » Ukuphela kokuqokwa kanye nokuqala kokuvota.
Disemba 20 - " Ukuphela kokuvota.
Januwari 24 - » Abaphumelele bazoshicilelwa.
Kusukela kulokho osuvele ukwazi ... ukubamba iqhaza lelo lamuhla ungaqala ukuvota 😀
Sanibonani futhi siyabonga UCarmen Manzanares (Ukuxhumana nokumaketha) yokuxhumana nathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ama-PortalProgramas Awards (ama-euro ayi-1400 ngeminikelo)
Angahle kanjani lawo ma-euro angu-1400 XNUMX kimi, kanye nalokho engikugcinile kungacishe kube yiMusic Man Bongo
Umklomelo we-SISI Courage wokuba yihaha engenamsebenzi kakhulu
Sawubona! ungalimazi imizwa embalwa Udoti osasele, ngithi Isibindi.
Nah, akekho noyedwa lapha ongangishaya lapho kubuhlungu khona
Indoda kuleyo nsimu angiyena lowo HAHA ongenamsebenzi
Manje u-Desdelinux ukukhombisa Umenzeli Womsebenzisi, kodwa ngenye indlela
Ungayifaka kanjani i-Arch Linux + KDE noma i-LXDE